Navoaka | ny kinova vaovao an'ny Audacious 4.1 Avy amin'ny Linux
Navoaka ny kinova vaovao an'ny Audacious 4.1
Darkcrizt | | fampiharana
Ny fanombohana ny ny kinova vaovao an'ny mpilalao mozika malaza Audacious 4.1 ary amin'ity fanontana vaovao ity ny fanohanana voalohany ho an'ny QT 6 dia aseho ho endrika vaovao, ary koa ny safidy hanangonana ny interface mpilalao ao amin'ny Qt sy GTK.
Ho an'ireo tsy zatra Aud Aud dia tokony ho fantatrao fa mpilalao mozika maivana ity, nalaina avy amin'ny tetikasa Beep Media Player (BMP), izay fork an'ny mpilalao XMMS mahazatra.
Ny mpilalao manohana ireo endrika audio malaza indrindra, anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny: MP3, AAC, WMA v1-2, Monkey's Audio, WavPack, endrika plug-in isan-karazany, endrika console / chip, Audio CD, FLAC, ary Ogg Vorbis.
Manana mpamoaka lisitry ny lisitry ny playlist mora vidy sy azo ahodina izay ahafahanao mijery, manasokajy, manovaova, mameno ary mamonjy ireo lisitry ny lisitry ny mozikao. Azo sintomina mivantana ao anaty lisitry ny playlist ny atiny, mahatonga azy io ho haingana sy mora ny manampy media avy amin'ny loharano samihafa.
Ny namboarina namboarina dia azo zahana sy finday ihany koa. Ny preset Equalizer dia azo tehirizina sy ampidirina, ary ampiorina handefasana preset mandeha ho azy mifototra amin'ny rakitra izay lalaovina.
1 Fanasongadinana Audacious 4.1
2 Ahoana ny fametrahana Audacious amin'ny Linux?
Fanasongadinana Audacious 4.1
amin'ny alalan'ny toerana misy anao, ny fampifangaroana safidy roa dia alefa, mifototra amin'ny Qt sy GTK. Ny fifanakalozana eo amin'ny interface dia azo atao ao amin'ny efijery fikirakirana, tsy mila manitsy ny rakitra .desktop.
Tamin'ny kinova teo aloha, nifindra tamin'ny interface iray mifototra amin'ny Qt 5 i Audacious, saingy ho valin'ny fanirian'ny mpamorona ny fizarana Debian sy Fedora dia tafiditra ao ny fivorian'ny samy interface.
Ireo safidy roa ireo dia mitovy amin'ny fandaminana ny asa, fa ny interface Qt dia mampiditra endri-javatra fanampiny sasany, toy ny fomba mora kokoa hamakivakiana sy handaharana ny fomba fampisehoana playlist. Ao amin'ny sehatra Windows, ny interface Qt miorina amin'ny toerana misy anao ihany.
Ny fiovana iray hafa izay aseho ao amin'ny kinova vaovao dia ny manome fanohanana feno ho an'ny ny rafitra fananganana Meson, miampy ny fanohanana voalohany ny Qt 6 dia nampiana.
Ny famantarana ny fitarihana sy fampidinana dia nanjary hita misimisy kokoa ao amin'ny playlist ary ny Channel Mixer dia manohana ny fantsona 2-fantsona mankany amin'ny fantsona 4-fantsona.
Amin'ireo fanovana hafa miavaka amin'ny kinova vaovao:
Plugin vaovao no napetraka hanamboarana hotkey ho an'ny mpiorina miorina amin'ny Qt.
Nanampy ny fahaizana mampiasa ny kodiarana totozy handehanana manodidina ny làlana amin'ilay interface mifototra amin'ny Qt.
Raha tokony ho ModPlug, plugin vaovao no ampiasaina miaraka amina crawler mifototra amin'ny OpenMPT.
Nanome ny fahaizana manafina ny rakotra rakikira ao amin'ny tontonana fampahalalana.
Asongadiny amin'ny fahasahisahiana ny lalan-dalao.
Mampiseho ny isan'ny fantsona am-peo ny varavarankely fampahalalana.
Niampy fahaizana manokana fotoana tsy am-piheverana hanafina ny fampandrenesana.
Finalmente raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao amin'ity kinova vaovao ity dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fametrahana Audacious amin'ny Linux?
Tamin'ny fotoana nanoratanao ny lahatsoratra, ny kinova vaovao an'ny mpilalao dia tsy nampidirina amina toerana fitehirizana fizarana Linux, ka raha tsy misy ny fonosana ho an'ny rafitrao dia tokony miandry na manangona ny kaody loharano izay azonao. avy amin'ny rohy etsy ambany.
Raha ireo mpampiasa Ubuntu sy izay fizarana azo na miorina amin'izany dia afaka mametraka ilay kinova vaovao izy ireo, saingy tsy maintsy ampidiriny ao amin'ny rafitr'izy ireo ity repository manaraka ity.
Ny tokony hataon'izy ireo dia ny manokatra terminal ary soraty ity baiko manaraka ity:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/apps -y
Vantany vao vita izany dia tsy maintsy apetrak'izy ireo izao ny kinova vaovao an'ny Audacious 4.1 miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Ho an'ireo izay mpampiasa ny Arch Linux na ny derivative azy dia afaka mametraka ny kinova GTK an'ny mpilalao izy ireo amin'izao fotoana izao, noho izany dia mila manana ny tahiry AUR ampidirina ao amin'ny rakitra pacman.conf fotsiny izy ireo ary manana mpiorina AUR napetraka.
Amin'ity tranga ity, ny maka ilay be mpampiasa indrindra, izay yay, dia ho vitantsika ny mametraka ny mpilalao amin'ny fanatanterahana ity baiko manaraka ity:
yay -S audacious-gtk
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Navoaka ny kinova vaovao an'ny Audacious 4.1
Ny kinova vaovao an'ny KDE Applications 20.12.2 dia efa misy izao
OWASP sy OSINT: Misimisy kokoa momba ny fiarovana an-tserasera, fiainana manokana ary tsy fantatra anarana